बारम्बार घरायसी झगडा हुन्छ ? ‘हाइपोमेनिया’ पो हो कि ! – Health Post Nepal
२०७८ भदौ २२ गते १३:४३
हाइपोमेनिया यस्तो रोग हो, जसमा मानिसको मन अस्थिर रहन्छ । यस्ता मानिसलाई बढी बोलिरहनुपर्ने हुन्छ । आफ्ना कुरामा जिद्दी गर्ने, भनेको नमान्ने, अपशब्द बोल्ने, सानो कुरामा पनि बढी रिसाउने, मन सधैँ चञ्चल रहने लक्षण देखापर्छ । यो रोग लागेको ठम्याउन निकै गाह्रो हुन्छ । हाइपोमेनिया रोग लाग्दा श्रीमान्–श्रीमतीमा चर्को विवाद भएको पाइन्छ, यतिसम्म कि, छुट्टाछुट्टै बसेको र बारम्बार कुटपिट भएको पनि भेटिएको छ । सबैभन्दा खतरा के छ भने यो रोग लागेको थाहै हुँदैन । बिस्तारै परिवारको एक सदस्य बढी रिसाउने, घमण्डी कुरा गर्ने, भनेको नमान्ने, तोडफोड गर्ने हुँदै जाएपछि मात्र यो रोग लागेको थाहा हुन्छ । सामान्य कुराकानीमा यो रोग लागेको पत्ता लगाउन सकिँदैन ।
कल्पना २५ वर्षीया महिला हुन्, उनको अर्को विवाह भएको २ वर्ष भयो । अहिले उनी श्रीमान् तथा परिवारसँगै छिन् । उनी अहिले छिट्टै रिसाउने, जिद्दी तर्क गर्ने, एउटा काममा स्थिर रहन सक्दिनन् । श्रीमान् तथा परिवारका अन्य सदस्यसँग उनको भनाभन भइरहन्छ । उनी कहिले रिस खप्न नसकेर रुन्छिन्, कहिले अरूलाई अपशब्द बोल्छिन् । परिवारका सदस्यहरूसँग उनको सम्बन्ध टाढिँदै गएको छ । कहिलेकाहीँ उनि ठूला–ठूला कुरा गर्छिन् । उनलार्य राति निद्रा राम्रो पर्दैन । श्रीमान्सँग दिनहुँ कलह भइरहन्छ । उनी बढी फुर्तिली देखिन्छिन् । उनलाई यो रोग लागेको हो भनेर चिन्न कठिन छ । उनलाई अस्पताल ल्याएपछि मात्र थाहा भयो, उनलाई हाइपोमेनिया रोग लागेको छ ।
राति २–३ घण्टा सुतेपछि उठ्छिन्, रेडियो, टि.भी. हेर्छिन् र अरूलाई डिस्टर्ब गर्छिन् । उनी मिठो खानेकुरा र पैसा मागिरहन्छिन्, अनि आफू धनी भएको फुर्ती लगाउँछिन् । उनका यी लक्षणहरूबारे समयमा थाहा भएन । लक्षण बढ्दै गएपछि उनलाई अस्पताल पुर्याइयो र अहिले उनको उपचार भइरहेको छ र क्रमिक रूपमा निको पनि हुँदै छ ।
त्यस्तै, रमा १६ वर्षीया किशोरी हुन् । उनी कक्षा ९ मा पढ्छिन् । १० दिनदेखि उनी फरक देखिएकी छिन् । आजकल उनी बढी बोलिरहन्छिन् । उनी छिट्टै रिसाउँछिन् । उनी निकै सिँगार–पटार गर्छिन् । उनी भन्छिन्, ‘म ३ दिनभित्र प्रधानमन्त्री बन्नेछु ।’ उनी आफूलाई फुर्तिलो, सिपालु, जोसिलो, राम्री ठान्छिन् । उनमा तडक–भडक निकै छ । विवाह गर्ने कुरा पटक–पटक गर्छिन् । एउटा काम नसक्दै अर्को काम सुरु गर्छिन् । उनी आफूले भनेको नमानेलाई पिट्छिन् । राति २–३ घण्टा सुतेपछि उठ्छिन्, रेडियो, टि.भी. हेर्छिन् र अरूलाई डिस्टर्ब गर्छिन् । उनी मिठो खानेकुरा र पैसा मागिरहन्छिन्, अनि आफू धनी भएको फुर्ती लगाउँछिन् । उनका यी लक्षणहरूबारे समयमा थाहा भएन । लक्षण बढ्दै गएपछि उनलाई अस्पताल पुर्याइयो र अहिले उनको उपचार भइरहेको छ र क्रमिक रूपमा निको पनि हुँदै छ ।
यो रोगको बिरामी एउटै कुरामा स्थिर रहँदैन, एउटा काम सक्न नपाउँदै अर्को काम थाल्छ । बिरामीले आनन्द लाग्ने कुरामा दिन बिताउँछ । म राजा बन्छु, म प्रधानमन्त्री बन्छु, म नेता बन्छु भन्छ । पैसा बाँड्ने, कुरा बढाइ–चढाइ बोल्ने, राति २–३ घण्टा मात्र सुत्ने, गीत गाउने, रातो, पहँेलोलगायत रंगीन लुगा लगाउन रुचाउने हुन्छ । यो रोग पटक–पटक दोहोरिने भएकाले राम्रो विचार पुर्याउनु जरुरी छ । यस्ता घटना समाजमा पटक–पटक देखिरहेका हुन्छन् । तर, रोग लागेर यस्तो भएको कुरा सुरुमा थाहा पाइँदैन, जसबाट बिरामी वा बिरामीको परिवारमा अनेकौँ घटना घट्न सक्छन् । मेनिया भनेको हाइपोमेनियाभन्दा कडा अवस्थाको रोग हो ।
– घमण्डी बन्ने, बढी फुर्ती लगाएर कुरा गर्ने ।
– धेरै खुसी हुने तर भनेको नमान्ने, झनक्क रिसाउने ।
– बढी आशावादी हुने, सम्भव नहुने कुरा पनि गर्न सक्छु भन्ने ।
– मीठो खानेकुराको माग गर्ने, राम्रा–राम्रा रंगीन लुगा लगाउने ।
– बढी पैसा माग्ने वा खर्च गर्ने ।
– पटक–पटक ऐना हेरिरहने ।
– २–३ घण्टा सुते पनि निद्रा पुग्ने ।
– यौनमा बढी रुचि हुने ।
– एउटा काम सुरु गर्न नपाउँदै अर्को थाल्ने तथा छटपटाउने ।
– रोगको शंका लागेपछि बिरामीलाई रिस उठ्नेकिसिमको व्यवहार नगरिदिने, अस्पताल लगेर सम्बन्धित विशेषज्ञको सरसल्लाह लिई उपचार गराउने ।
– यो रोग एकपटक सुरु भएपछि अर्कोपटक दोहोरिने समस्या ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म रहन्छ । त्यसैले यसलाई जटिल मानसिक रोग मानिन्छ । अर्कोपटक दोहोरिँदा कहिले पहिलेकै लक्षण दोहोरिन्छन् त कहिले उल्टोखालका (डिप्रेसनजस्तै दिक्क हुने, रुने, मर्छु भन्ने, राति निदाउन गाह्रो हुने) लक्षण देखिन्छन् ।
– यो रोग पटक–पटक दोहोरिने भएकाले यसबारे राम्रो जानकारी हुनु अति आवश्यक छ ।
– हाइपोमेनिया रोगका बिरामी घमण्डी हुन्छन् । उनीहरू आफूलाई बिरामी भन्न रुचाउँदैनन् र आफूले भनेको नभए झगडा गर्ने अरूलाई पिट्ने गर्छन् । त्यसैले यस्ता बिरामीसँग अनावश्यक बादविवाद गर्नुहुँदैन, नम्र भएर कुरा गर्नुपर्छ ।
– हाइपोमेनिया रोग बढ्दा बिरामीले औषधि लिन मान्दैनन् । त्यस्तो वेलामा तुरुन्त अस्पताल लैजानुपर्छ । हाइपोमेनिया रोग निको भइसकेपछि पनि पटक–पटक बल्झिन सक्छ ।
प्रा.डा. सि पी सेढाई